Imeyili Eqondile Esebenzayo! | Martech Zone
NgoLwesibili, Januwari 9, 2007 NgoLwesibili, ngoJuni 9, i-2015 Douglas Karr
Bengizimisele ukubhala ngalokhu kusukela ngaphambi konyaka omusha kodwa bekufanele ngikhiphe isithwebuli u-ol ukuze sihlanganise lezi zithombe zemeyili ethile engiyitholile muva nje. Okusemqoka wukuthi abanye imeyili eqondile isasebenza. Nazi izibonelo ezi-3:
UJack Hayhow ungithumelele incwadi yakhe, Ukuhlakanipha Kwengulube Endizayo. Ngicabanga ukuthi lesi 'yisipho' sami sokuqala njenge-blogger! Nginezincwadi ezimbalwa ku-nightstand yami njengamanje engizoziqeda - kepha ngilangazelela ukumba kule. Bekucocekile impela ukuthola inothi elibhalwe ngesandla kuJack kanye nencwadi. Ukuthi uJack uthathe isikhathi ukungibhalela futhi wangithumela incwadi kusho lukhulu vele!
CVS Ikhemisi lingithumelele ikhadi lamaholide lingibonga ngokuxhaswa kwami. Kwasayinwa ngisho nayedwa ngamunye wabasebenzi! I-CVS yami iyamangalisa. Kungikhumbuza impela isitolo esiningi sasisekhoneni esasivame ukusivakashela sikhula emabhukwini aseNewtown Connecticut (Leso sitolo sasibizwa nge-Crossroads… babevame ukuvumela izingane zithathe ubhiya zihambe nazo ziye kubazali bethu ngocingo … Ndoda sengimdala!). Ukube iCVS ibinezithelo, mhlawumbe bengingeke ngiye ukuyothenga nakancane! I-CVS ifakazela ukuthi ungaba yixhaxha elikhulu kepha uphathe abantu abanjengomakhelwane wakho.
Wikimedia ungithumelele ikhadi elinombhalo wokubonga ngomnikelo wami ku Wikipedia ngonyaka odlule. Imvamisa ngithatha izimali zami ze-Paypal ngizibuyisele kubathuthukisi be-plugin nakumawebhusayithi acela iminikelo - uma isoftware yabo noma insiza ilusizo. Ngisebenzisa iWikipedia kakhulu kule bhulogi ngakho-ke uzojabula ukwazi ukuthi ingxenye yemali yokukhangisa yesayithi ibuyiselwa kwamanye amasayithi. (Okusele kuyadingeka ukukhokhela imfundo yendodana yami yasekolishi!).
Kuyathakazelisa kulolu suku nakulesi sikhathi ukuthi abantu basabona ukuthi ukuthinta 'komuntu' kusho ukuthini. UJack ubengangithumelela incwadi yakhe nge-Amazon, kanti iCVS neWikimedia bezingangithumelela i-imeyili kalula nje zingibonge. Ngingummeli omkhulu we-imeyili… Ngiyalithanda iqiniso lokuthi lingenziwa ngezifiso futhi lenziwe ngemishini. Lokhu kudinge umzamo omncane futhi nakanjani kubiza okungaphezulu. Lokho kungitshela ukuthi laba bantu babecabanga ukuthi ngibaluleke ngokwanele ebhizinisini labo ukuthi kufanelekile ukutshala kimi. Lowo ngumyalezo oqinile, akunjalo?
Yilolo hlobo lwemeyili eqondile esebenza. Ezinye izinkulungwane zezingcezu zeposi eziqondile engizithola lapha akufanelekile ukuzisho. Ngitshele amaklayenti ngaphambilini ukuthi isikhathi okufanele unake ngaso umuntu othile ngeposi eliqondile yisikhathi esibathathayo ukuthi bahambe ukusuka ebhokisini labo leposi baye emgqonyeni kadoti wabo. Angikashintshi umqondo wami ngalokho. Ukuthumela iphakethe elibhalwe ngesandla noma ikhadi lokubonga nakanjani kunginaka!
Tags: mail ngqoukumaketha okuqondileukumaketha kwendabuko
I-Apple Iqalisa… Ifoni. Ngabe omunye umuntu uzamula?
Jan 9, 2007 ku-9: 29 AM
Ngokuqinisekile. Sifuna ukuthintwa komuntu - akusona yini futhi leso sezizathu esenza amabhulogi abe makhulu kangaka?
Abazali bethu abakhulu babexhumana ngezincwadi zothando ezibhalwe ngesandla. Namuhla kuyi-SMS esheshayo. Akufani ncamashi, eh?
Jan 9, 2007 ku-10: 57 AM
> Ukuhlakanipha Kwengulube Endizayo. Ngicabanga ukuthi lesi yisipho sami sokuqala? njenge-blogger!
UDouglas onakekelayo - ubungazi yini ukuthi ukwamukela izipho kungaholela ekutheni kubuzwe imibuzo nge-🙂 LOL
> Ngivame ukuthatha izimali zami ze-Paypal ngizibuyisele kubathuthukisi be-plugin nakumawebhusayithi acela iminikelo - uma isoftware noma insiza yabo ilusizo.
Ngiqale ukukwenza lokhu ngasekupheleni konyaka odlule. Kungumuzwa omuhle ukukwazi ukufaka isandla kulabo abanikela ngesikhathi sabo ukwenza izinto esizisebenzisa nsuku zonke.
Jan 9, 2007 ku-11: 18 AM
Siyazi yini ukuthi lezi zingcezu zeposi eziqondile zisebenzile ngoba ziqhube ukwanda kokuthengisa ezinkampanini ezithumele imikhankaso yeposi eqondile kuwe?
Nasi isaziso kubo bonke abakhangisi, ngishibhile, kulula futhi ngithembekile. Ungangithenga, kodwa ngizokwazisa wonke umuntu ukuthi ngithengiwe. 🙂
Ngivumelana nawe ku-Paypal. Ngiyethemba ukuthi kuwumkhuba oqhubekayo. Umthombo ovulekile ubusilungele sonke!
Njengomthengisi wedatha, kunzima ukulinganisa lolu hlobo lwezindleko, akunjalo? Ngoba awukwazi ukukala okuthile akusho ukuthi kungumbono omuhle, noma kunjalo. Izinkampani 'ezenza okulungile' seziqala ukuthuthuka impela. Ngikholwa ngokweqiniso ngelinye ilanga sizoba nenkomba 'yezinzuzo zomphakathi' yezinkampani ngolunye usuku ukuze abantu bazosebenzisana nezinkampani ezenzela izwe okuhle kunokubi.
Okungenani ngithemba kanjalo!
Ngaphandle kokungabaza, ukwenza okulungile kuhle. Futhi ngizoba umuntu wokuqala ukuthola izinkampani ezenza izinto ezinhle. Ukuchitha isikhathi wenza le misebenzi kushayela i-ROI engcono kunokuchitha imali kuthengiso lwethelevishini.
Eminyakeni eminingi edlule, bengihlala egumbini elinabantu abavela eHallmark. Bebefuna ukudala uhlelo lokubonga oluzenzakalelayo lwenkampani yami, oluboshwe ohlelweni lweCRM. Kimi, lokho bekuphikisana nalokho okukhuthazayo. Kukhona umugqa omuhle kangaka phakathi kokwenza okuhle, ukwenza okuthile okubukeka kukuhle, nokuzama ukushayela inzuzo. Kuya ephuzwini lakho, uma wenza okuhle, ukuthengisa nenzuzo kuzolandela.
Ngicabanga ukuthi ukuphawula kwakho maqondana "nokuthinta komuntu" kuvumeleke kakhulu.
Siqaphele ukuthi ukuthumela ama-hard copy marketing kanye nama-media kits ukukhuthaza
inkampani yethu ikhokhele kakhulu. I-imeyili ilungile, kepha iyaqala
kuncike ekuthembekeni. Ugaxekile omningi kanye ne-junk. Kuyacasula.
Imeyili eqondile; kodwa-ke, iyaqhubeka nokuvala ukuthengisa, futhi njengoba ushilo “umuntu
thinta ”kubonakala kusiza ukuqashelwa.
Sithole ukuthi ukuhlanganisa ubukhona bewebhu online nomkhankaso weposi oqondile ohlanganisiwe
isebenza kangcono ezinkampanini zekhathalogi esizimele. Kukhona inani elikhulu
ekumaketheni aneziteshi eziningi. Akusekho nkampani eyodwa engeke ithembele ekunciphiseni emotweni eyodwa yokumaketha.
Ngiyithokozele kakhulu indatshana yakho… unomfundi omusha okhuthele kimi!
ikubize futhi "iposi leposi" langempela liyaqhubeka nokufakazela